SARCOIDOSISUK နှစ် 20 ပြည့်
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပစ်မှတ်အောင်မြင်ပြီတကား - £ 63000 ကျော်ကြီးပြင်း
20 နှစ်မြောက်မဲဆွယ်စည်းရုံးရေးဖန်တီးသောအခါကျနော်တို့၏တစ်ဦးရည်မှန်းချက်ကြီးပစ်မှတ်သတ်မှတ်ပြီး £60,000. အားလုံးကျွန်တော်တို့ရဲ့ထောက်ခံသူများ၏အကူအညီဖြင့်ငါတို့သည်£ 63000 ထက်ကျော်လွန်တဲ့စုစုပေါင်းပြုစုပျိုးထောင်သောကျော်လွန်သွားပြီစိတ်လှုပ်ရှားပြီးအလွန်မာနထောင်လွှားကြသည်။ ကျနော်တို့ပြီးသားယခုကြှနျုပျတို့ကျော်ရှိတယ်ဆိုလိုတာကနှစ်ဆခံရဖို့အလှူငွေဘို့စီစဉ်ပေးပါပြီ တစ်ဦးရောဂါပျောက်ကင်းဘို့သုတေသနသို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံဖို့£ 120,000, အလားအလာဟာအသက်ကယ်ငွေကြေးထောက်ပံ့ mTOR သုတေသန..
သို့သျောလညျးကိုတောင်ကင်ပိန်းတစ်ဦးရဲ့အောင်မြင်မှုအတွက်အဆုံးသတ်ရေးနှင့်အတူကျနော်တို့နေဆဲကျွန်ုပ်တို့သည်မေတ္တာမှာလုပျသောအရေးပါသောအအလုပ်ကိုဆက်လက်အလှူငွေများလိုအပ်ပါတယ်။ ဒီတော့ SarcoidosisUK မှလှူဒါန်းပါ။ တိုင်းလှူဒါန်းမှုကူညီပေးသည်။
ရုံမဲဆွယ်စည်းရုံးရေးစာမျက်နှာပေးခြင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့အရာရှိတဦးကသွားရောက်ကြည့်ရှုနှင့်အွန်လိုင်းလှူဒါန်း ယနေ့။ အတူတူကျနော်တို့ Sarcoidosis အနိုင်ယူနိုင်ပါတယ်။
သဘာဝတရားရောဂါပြီးပညာဂျာနယ် သုတေသနတစ်ခုသိသာအပိုင်းအစပုံနှိပ်ထုတ်ဝေ ဗီယင်နာတက္ကသိုလ်မှမှ။ သူတို့ကတစ်ဦး mouse ကိုအတွက် mTOR တစ်သဘာဝကျကျဖြစ်ပေါ်ပရိုတိန်း "ပေါ်တွင် switching" mouse ကို Sarcoidosis ကြောင်းပေးပြသခဲ့သည်။ Excitingly ပြီးသားလူ့ mTOR blockers အတည်ပြုရှိပါတယ်။ ထိုကြောင့်ငါတို့သည်အလှည့်ထဲမှာလူသားတွေအတွက် mTOR ပယ် switching Sarcoidosis ချွတ် switches လျှင်ကြည့်ဖို့သုတေသနလုပ်ငန်းရန်ပုံငွေချင်တယ်။
အောင်မြင်သောလျှင်ဤ Sarcoidosis များအတွက်ကမ္ဘာ့ပထမဦးဆုံးအစဉ်အဆက်ကုသမှုပေးလိမ့်မယ်။
Sarcoidosis အဘယ်သူမျှမကုသနဲ့အောက်မှာ-သုတေသနပြုရောဂါဖြစ်ပါသည်။ လူနာရောဂါလွှတ်ထဲသို့ဝင်ကြောင်းကိုမျှော်လင့်ချက်နဲ့ကုသမိမိတို့၏ရောဂါလက္ခဏာတွေရှိသည် ဖြစ်. , သို့သော်ရောဂါဖြစ်ပွားမှု၏ 20-30% ထဲမှာနာတာရှည်ဖြစ်လာနှင့် 5% ကိစ္စများတွင်ပါက terminal ကိုဖြစ်ပါတယ်။
10000 1 Sarcoidosis ရဖို့မျှော်လင့်ထားနိုင်ပါတယ်။ ဒါကလူဦးရေသန်းမျှလူသိများရောဂါပျောက်ကင်းအတူရောဂါခံစားနေရပြီးနေကြတယ်န်းကျင်ကိုဆိုလိုသည်။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့သုတေသန၏အရေးပါမှုနှင့်အရေးတကြီးကျနော်တို့ Sarcoidosis ကနေသေဆုံးကြသူမြား၏နာမ၌ရရှိသောအလှူငွေများအားဖြင့်ချွန်ထက်အာရုံစိုက်ထားခြင်းဖြစ်သည်။ SarcoidosisUK အားလုံးကိုအလှူငွေ၏6မှာ 1 အသုဘပြားကနေဒါမှမဟုတ်အောက်မေ့လွမ်းအလှူငွေ၌ရှိကြ၏။
အဆိုပါလှူဒါန်းခြင်းသာမိုမီတာ plugin ကို https://wordpress.org/plugins/donation-thermometer/ သုံးပြီး Created ။ £ 63.614 £ 63.614 100%
ဂျိမ်း Milbourne ရုံ 29, undiagnosed နှလုံး Sarcoidosis ၏အနိစ္စရောက်လေ၏။ မယ်တော်, ဆူး, သုတေသနကိုဦးတည်ကျော်£ 8,500 ထမြောက်တော်မူခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏နှလုံး Sarcoidosis သုတေသနဂျိမ်းကဲ့သို့ပိုပြီးသေဆုံးမှုတားဆီးလိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်ပါသည်။
ကီဗင်ရော့စ်, 39 နှင့်လူငယ်သုံးဦးသားသမီးများ၏ဖခင်တစ်ဦး, Sarcoidosis ၏အနိစ္စရောက်လေ၏။ သူ့အစ်ကို-In-ဥပဒေလန်ဒန်မာရသွန်သို့ပွေးနှင့်သူ၏နာမကိုအမှီ£ 10000 ကျော်ထမြောက်တော်မူ။ ကျွန်ုပ်တို့၏သုတေသနယင်း၏ပုဒ်ထဲမှာ Sarcoidosis ရပ်တန့်ရန်ရည်ရွယ်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏လှူဒါန်းခြင်းကတိသစ္စာ: SarcoidosisUK 20 ရန်သင့်လှူဒါန်းမှုကိုသုံးပါလိမ့်မယ်ကြိမ်မြောက် Sarcoidosis သို့ဆေးဘက်ဆိုင်ရာသုတေသနရန်ပုံငွေနှစ်မြောက်ကင်ပိန်း။ ကျွန်ုပ်တို့၏ရည်မှန်းချက်သုတေသန၏ဤဧရိယာ sarcoidosis များအတွက်ရောဂါပျောက်ကင်းဆီသို့ဦးဆောင်ထဲမှာအများဆုံးဂတိတော်ကိုပြသထားတယ်အဖြစ်, mTOR blockers လူ့စမ်းသပ်မှုတွေသို့သုတေသနလုပ်ငန်းရန်ပုံငွေဒီစည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေးကနေအလှူငွေသုံးစွဲဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ဦးဆက်ကပ်အပ်နှံသုတေသနအဖွဲ့နှင့်ဖြစ်စဉ်ကိုသူဗြိတိသျှအဆုတ်ဖောင်ဒေးရှင်းနှင့်အတူလက်တွဲခုနှစ်တွင်သုတေသနအဆိုပြုချက်ကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ရံပုံငွေလက်ခံရရှိရန်ရွေးချယ်ထားသည့်ပါလိမ့်မည်။ SarcoidosisUK ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုကော်မတီကအပေါ်ထိုင်ခုံကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းရန်နှင့်ကျနော်တို့တစ်တွေနောက်ဆုံးနှုတ်ဆက်ခြင်းဗီတိုအာဏာရှိသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ကတိကဝတ် Sarcoidosis ထဲသို့အကောင်းဆုံးသုတေသနအဆိုပြုချက်ရန်ပုံငွေအမြဲဖြစ်တယ်, SarcoidosisUK နှင့်ဗြိတိသျှအဆုတ် Foundation ကသတ်မှတ်မြင့်မားသောစံချိန်စံညွှန်းများနှင့်တွေ့ဆုံရန်မဟုတ်ဘဲ mTOR blockers သို့အဆိုပြုချက်သုတေသနသင့်ကြောင်း 20 မျက်နှာသို့အလှူငွေကြိမ်မြောက် နှစ်မြောက်ကင်ပိန်းဟာ SarcoidosisUK ယေဘုယျသုတေသနဘတ်ဂျက်မှလျှောက်ထားပါလိမ့်မည်နှင့်ရန်ပုံငွေများကိုလာမယ့်အောင်မြင်တဲ့သုတေသနအဆိုပြုချက်ကိုဆီသို့သွားပါလိမ့်မယ်။